Home » Travel Associations News » Ny Travel Leaders Network dia manomboka amin'ny fanitarana lehibe iraisam-pirenena
Travel Leaders Network, fikambanana mpiasan'ny fizahan-tany lehibe indrindra any Amerika Avaratra, miaraka amin'ny orinasa rahavavy Travel Leaders Corporate, dia nanomboka ny programa fanitarana iraisam-pirenena lehibe hanitarana ny fahafaha-manao sy hanomezana tolotra mivoatra ho an'ireo mpanjifa orinasa. Hatreto dia masoivoho lehibe fitetezam-paritany 40 avy any Eropa, Amerika Latina, Moyen Orient ary Azia no lasa mpikambana vaovao ao amin'ny Travel Leaders Network. Agence maro hafa no antenaina hiditra ao anatin'ny volana ho avy.
"Mamorona tambajotram-pifandraisana izahay izay ho tambajotra mpampitohy ahafahantsika mamaly ireo fotoana lehibe kokoa na amin'ny faritra na amin'ny sehatra iraisam-pirenena," hoy i Roger E. Block, CTC, filohan'ny Travel Leaders Network. "Ireo masoivoho ireo, notohanan'ny mizana sy ny haitao ary ny fitaovana misy amin'ny alàlan'ny Travel Leader, dia napetraka mba hanomezana serivisy serivisy namboarina manokana sy namboarina manokana ary tsara kokoa ho an'ireo mpanjifa efa misy sy vaovao ao anatin'ny jeografia avy.
Mpikambana vaovao, ny sasany amin'izy ireo dia iray amin'ireo masoivoho fitaterana orinasa lehibe indrindra any amin'ny fireneny, manatevin-daharana mpikambana mpikambana iraisam-pirenena maro an'ny Travel Leaders Network. Raha atambatra, ny tambajotra dia manana solontena maso any amin'ny firenena efa ho 50 izao. Ho fanampin'izany, ny masoivohon'ny Travel Leaders Group manerana an'i Etazonia, Kanada, UK ary Mexico, misy ny CTS (Corporate Travel Services), dia handray anjara lehibe amin'ny fanitarana iraisam-pirenena.
“Ny drafitra ataonay dia ny hanao sonia solontena mpitarika Travel iray manokana any amin'ireo firenena manan-danja eran'izao tontolo izao. Mpiara-miasa izahay izay afaka manolotra portfolio feno serivisy ho an'ny orinasa, fialam-boly ary hetsika ary ekena any amin'ny fireneny sy ny mpiara-miasa aminy ho maso ivoho mifantoka amin'ny serivisy, ”hoy i Block.
Ireo mpikambana iraisam-pirenena vao tafiditra dia hanana fidirana amin'ny loharanon-karena feno an'ny Travel Leaders. Anisan'izany ireo fitaovana famandrihana an-tserasera, fandaharan'asa marketing isan-karazany, fandaharan'asa fandraisam-bahiny an'ny orinasa, ao anatin'izany ny SELECT Hotels & Resorts Program, ny tambajotram-pifandraisana iraisam-pirenena (DMC) ary ny fidirana amin'ny loharanom-pahalalana sy fampianarana. Ho fanampin'izany, ny mpikambana dia afaka manohana ny kaonty iraisam-pirenena sy ny mpanjifa eo an-toerana amin'ny alàlan'ny suite teknolojia farany-to-end an'ny Travel Leader izay manome fitantanana profil, fanomezan-dàlana amin'ny fitsangatsanganana an-tserasera, fanamafisana ny angona sy analytics, fivoriana teknolojia ary fitaovana fanaovana tatitra ny mpanjifa. Ireo mpiaramiasa iraisampirenena koa dia hanana fidirana amin'ny sasany amin'ireo fandaharana fialamboly marquee atolotry ny Travel Leaders Network.
"Ity programa fanitarana ity dia manova ny Travel Leaders Network sy ny Travel Leaders Corporate ho lasa mpilalao iraisam-pirenena matanjaka kokoa miaraka amin'ny fahaiza-manao matanjaka ary mahatratra ny fahafahan'ny fitantanana kaontim-pirenena tena izy mifototra amin'ny maodelim-panompoana tena manokana amin'ny sehatra iraisam-pirenena," hoy i Gabe Rizzi, filohan'ny Travel Leaders Corporate. “Ireo mpanjifa dia hotompoin'ny masoivoho eo an-toerana izay mpitarika amin'ny tsenany manome serivisy fitsangatsanganana orinasa lehibe tohanan'ny teknolojia maro karazana. Ireto masoivoho vaovao ireto dia tohanan'ny iray amin'ireo tambajotram-pifandraisana lehibe indrindra manerantany. Izahay dia tsy mpiasan'ny foibe fiantsoana ary tsy izy ireo koa. Io no toerana malalantsika sy mampiavaka antsika amin'ny fifaninanana. ”
Ny fanampiana ny mpikambana dia homena isam-paritra miaraka amin'ireo toerana manan-danja hita isam-paritra, ao anatin'izany i Amerika Latina; Eoropa, Moyen Orient ary Afrika; sy Azia Pasifika. "Nanakarama ireo matihanina amin'ny varotra isam-paritra izahay eo amin'ny sehatry ny varotra, ny asa, ny haitao ary ny fitantanana kaonty mba hamoronana rafitra fanampiana eo an-toerana kokoa hanomezana izay ilain'ny mpikambana iraisam-pirenena," hoy i Rizzi nanampy.
Angeles Yugdar, filoha lefitra zon'ny International Markets for Travel Leaders Group, no mitarika ny ezaka fanitarana sy fanaraha-maso ireo mpikambana ao amin'ny ekipa isam-paritra. Kevin Brown, filoha lefitry ny varotra iraisam-pirenena ho an'ny Travel Leaders Corporate, dia miasa amin'ny andraikitra lehibe koa. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa rezionaly dia misy:
• Carina Fernandez Grenno, talen'ny fitantanana ny mpiara-miasa isam-paritra, Amerika Latina
• Susan Lancaster, talen'ny Regional Partner Management, Europe, Middle East ary Africa
• Pat Siow, talen'ny Regional Partner Management, Asia Pacific
Anisan'ireo mpikambana ao amin'ny masoivoho iraisam-pirenena vaovao:
Mpitondra dia any Brezila
Mpitondra dia any Egypt
Mpitondra dia any Hong Kong
Travel Leader Indonezia
Safidio ny Travel SA
Vondron'orinasa + Travel
Fivoriana sy fivoriambe iraisam-pirenena Panama Inc.
Serbia mpitarika ny fitsangantsanganana
STC Travel Soisa SARL (Havas Voyages)
Travel Leader Thailand
Sky Travel Holdings Limited (Okraina)
Mpitondra dia any Uruguay
Ireo masoivoho etsy ambony dia manatevin-daharana ireo mpikambana iraisam-pirenena Travel Leaders Network izay misy:
Greaves Travel Pvt Ltd sy Orchid Voyages Pvt Ltd.